को हुन् साम्राज्ञीसँग यस्तो अवस्थामा देखिने युवा ? – PanchKhal Online
Home/मनोरंजन/को हुन् साम्राज्ञीसँग यस्तो अवस्थामा देखिने युवा ?
91 Less thanaminute
चलचित्र ड्रिम्सबाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरेकी नायिका सम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह यतिबेला इन्डोनेसियाको बालीमा छुट्टी मनाइरहेकी छिन् । पछिल्लो समय महंगी नायिकाका रुपमा परिचित साम्राज्ञीले बालीमा मस्ती गरेको तस्बिरहरु सार्वजनिक गरेकी हुन् । तस्बिरमा उनि एक युवासँग मस्ती मुडमा देखिएकी छन् ।बालीको एक विचमा रातो बिकिनीमा देखिएकी साम्राज्ञीको यस्तो तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक संजालमा हल्लीखल्ली नै मच्चिएको छ । सम्राज्ञी देवांश राणासँग प्रेममा रहेको चर्चा चलिरहँदा कतै ती युवा देवांश नै त होइनन् भन्ने अड्कलबाजी पनि गरिएको छ ।
शुक्रबार दिउँसो प्रेमीसँग समुन्द्री किनारमा रातो विकिनीमा रोमान्स गरेको तश्विर बाहिरिएपछि भने साम्राज्ञीको फेरि एकाएक चर्चा चुलिएको छ । तीन तश्विरमा देवाङ्कसले साम्राज्ञीको ओठ, छाती र कम्मरको पछाडिको भाग चुमेका छन् । ती तश्विरहरु उनले आफ्नो इन्टाग्राममा साझेदार गरेका थिए । तर, गालीको वर्षात भएपछि हटाए । धेरैले यसलाई अपाच्य तश्विरको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । भने, यसले साम्राज्ञीको छविमा समेत असर पुग्ने कतिपयको टिप्पणी छ ।
हुनत, सेलिब्रेटीहरुको पनि पर्सनल लाइफ हुन्छ । आम सर्वसाधारण जसरी उनीहरु पनि खुलेर रमाउन चाहन्छन् । माक्सबिना निर्धक्क हिँड्न चाहन्छन् । तर, स्वदेशमा त्यो अवसर निकै कम मिल्छ । यसकारण उनीहरु ‘क्वालिटी टाइम स्पेन्ड’ गर्न विदेश निस्कन्छन् । नेपालमा कुर्था-सुरुवालमा देखिने अभिनेत्री पनि विदेश पुगेपछि विकिनी लगाउँछन् । र, पोज-पोजका तश्विर सामाजिक सञ्जालमा साझेदार गर्छन् । तर, कहिले काहिँ साधारण लागेको तश्विरले पनि असाधारण रुप धारण गर्ने गर्छ । अभिनेत्री साम्राज्ञीलाई प्रेमीसँग मस्ती मुडमा देखिएको तश्विर पाच्य लागे पनि दर्शकलाई भने पचाउन गाह्रो भएको छ ।
यी हुन् सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने ‘पाँच नेपाली नायिकाहरु’
सलमानले बलिउडमा काम गर्न नपाउने !
यसकारण म लुकेर एक्लै पोखरा जान्छु : करिश्मा मानन्धर
मृ’त्युको मुखमा परेर बाँचेका भारतीय स्टारहरु
‘आइएम ट्वान्टी वन’ मा जसिता
रामेछापमा बोलेरो १५० मिटर तल खस्यो : दुई जनाको मृ त्यु, २८ घा इते
कोरोनाले एकै दिन ३७१८ को मृत्यु – स्पेनमा ९१३, इटलीमा ८१२ र अमेरिकामा ५७३
मलेसियामा काेराेनाकाे कारण मर्नेकाे सङ्ख्या ३७ पुग्यो
कोरोना आशंका गरिएकी युवतीको वीर अस्पतालमा मृत्यु
अभिनेता अनमोल केसिको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागे उनी ?
लक डाउन २१ दिनसम्म लम्बाउने सरकारको तयारी
कोरोना भाइरस: नेपालमा जुनसुकै बेला इन्टरनेट अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी !
नेपालका चौथो कोरोना संक्रमित युवा भन्छन- ” औषधी नदिइ शवदाह छेउमै एक्लै राखिएको छ “
डरलाग्दो खुलासा: ‘जेष्ठ १७ देखि २८ गते भित्र ७ रेक्टरको भूकम्प जान्छ, लेखेर राख्नुस’ – ज्योतीष अर्जुन
ताजा अपडेट : आफ्नै छोराले बुहारीको हत्या गरि रगत चुहाउँदै जब आमाको कोठामा खुकुरी लिएर आइपुगे (भिडियो सहित)
प्रबन्ध निर्देशक : ज्ञानेन्द्र के.सि
निर्देशक : सुरेश लामा
प्रधान सम्पादक : सीता लामा
बजार निर्देशक: गणेश कुनवर
कार्यकारी सम्पादक : रोशन अधिकारी